MUDANE XILDHIBAAN ADOO INTAN XASUUSAN CODKAAGA BIXI! • Horseed Media
You are here: Home / Opinion / MUDANE XILDHIBAAN ADOO INTAN XASUUSAN CODKAAGA BIXI!
MUDANE XILDHIBAAN ADOO INTAN XASUUSAN CODKAAGA BIXI!
Posted: HORSEED STAFF - February 7, 2017
Dhamaan umadda soomaaliyeed waxa ay indhaha ku hayaan 8 bisha Febraury doorashada madaxtinimo ee maalintaas la asteeyey inay ka dhacdo Muqdisho. Waxaa jira waxyaabo badan oo bulshadu niyada ku hayso ayna jecelyihiin inay noqdaan natiijada Dooraashadda. Waxay shacabku rabaan in la doorto shaqsi u qalma hogaaminta wadanka oo wadanka dhibta kasoo baxaya badbaadiye iyo hogaan fiican u noqda oo geediga baadi goobka iyo soo celinta qaranimadeeni meel Doog ah ku fura.
Shacabka aad masuulka ka tihiin ee u badan dhalinyaradu waxa uu aad ugu han weyn yihiin inaad noqotaan kuwo rajadii luntay soo celiya.
Dhalin yarada soomaaliyeed waxa ay rajo weyn ka qabaan in doorashadani ay wadanka wax badan ka badasho oo ay helaan nolol fiican kuna negaadaan wadankooda, tahriibta iyo ka cararka wadankana ay kaga baaqsadaan.
Sanadkasta badaha caalamka waxa ay noloshooda galaaftaan tiro badan oo dhalinteena ah iyagoo raadinaya nolol iyo meel ay mustaqbal fiican ku sameysan karaan.
Wadamada ay dhalintu u baxsanayaan intooda badan waa wadamo ka kheyraad yar wadankeena laakiin markii wixii ay haysteen ay ka faa’iideysteen nolosha shacabkoodu meel sare gaartay.
Hooyooyinka soomaaliyeed waxa ay idin ka rajeynayaan caruurtii ay burburka kuso koriyeen una so samreen inaad mustaqbalkooda u qeexdaan halka u aadayo iyo hogaamiyaha aad u doorataan masuuliyadaas.
Waqtigan waxaa muuqata rajo ah in dadku fahmeen wadanku inuu ka badanyahay qofka rajadaas soo celin kara inaad doorataan waa masuuliyadiina.
Waxaa jira musuq maasuq badan oo idinka laftiinu aad soo sameyseen markaad kursigan kuso baxayseen kharashaad badan baad bixiseen in badan oo idinka idin ka mid ah waxa ay ku fakarayaan wixii ka baxay wax ka badan inay usoo noqdaan. Taas waxaad uga bixi kartaan idinkoo maqla baaqii sheekh shibile ee ahaa laba danbi ha isku darsanina inaad laaluush qaadataan iyo inaad nin xun doorataan.!
Nin xaakima oo deegaan maamulayey ayaa hadda ka hor mar Abaari dhacday dadkii deegaanka isugu yeeray waxa uu ka codsaday qofkasta inuu Beri koob caano ah keeno goob uu u asteeyey dadkii meesha isugu yimid qofkasta waxa uu boqorka ka balan qaaday inay ajiibeen baaqiisa ayna keenayaan caanaha.
Dadkii waxa uu qofkasta bilaabay habeenimadii inuu meesha geeyo caanihii laakiin nasiib Darro ma jirin cid ka fiirinaysa qofkasta waxa uu keenay.
Markii waqtigii loogu tala galay goobta in wax la geeyo dhamaaday, boqorkiina uu meeshii yimid alaabtiina la fiiriyey waxaa meeshi lagula kulmay in dad yar ay keeneen caano balantiina kaso baxeen halka inta kale ka faa’iideesteen qarsoodiga oo ay biyo iyo alaab faaruqa geeyeen.
Boqorkii waxa uu u khudbeeyey dadkii waxa uu ku yiri” waxa aynu nahay dhamaanteen ul iyo diirkeed waxa aynu waxa ku nahay wadajirka wadajirkuna wuxuu ka bilowdaa kaalinta aad adigu ku jirtid, adigu hadaad weel madhan keentay yaad ka sugeyseen caanaha inuu keeno”.
Haatan idinkuna waxaad gasheen balan iyo masuuliyad. xildhibaana yuusan ku haleen midka kale inuu waxbadalo codkaaga ayaa xildhibaanow ah kan wax badali kara oo rajada wadanka soo celin kara. Ku xisaabtan codkaaga adiga ayaa ah qofka la sugayo dhib malahan in lagaa guuleysto adoo cidda adaan masuuliyada ku aamini karto codka siiyey.
U hiili dadka aan hadli karin oo codkaagu ha noqdo mid aadan ka shalaayiin, alle keliya ayaa ah cidda aad ka heli karto abaal gud aad ku faraxdo hadaad masuuliyaas meesheeda dhigto.
Ugu dameen xildhibaanoow dooro qof aad isleedahay waxa uu leeyahay sifooyinka hogaamiyaha wadanku xiligan u baahanyahay. Ha dooran qof aan laheen aragti hogaamineed, cadaalad iyo wadaniyad. Wadanku wuxuu u baahanyahay badbaado waxaa jira weeraro meelkasta uga imaanaya oo dano shisheeye u badan.
Wadankeena waa wadan caalamku baahanyahay waxa uu dhacaa meel aduunka xudun u ah waxa uu leeyahay kheyraad ka badan dadkisa dunida aan wax ka gaarsiin karno.
Alle waxaan ka rajeen inuu idin waafajiyo abshirta codkiinuna aado qofka ugu kheyrka roon 24kaas musharax.
W/Q: Cabdikariim Aadan Jaamac